News & ihe Factory, Suppliers - China News & ihe Manufacturers
Ekwentị: + 086-025-57866111
The zuru okè ogwugwu nke CIMT2017 Jianke ọhụrụ na-enwu brilliantly
site ha na 18-05-05
Site April 17 ka 22nd, 15 China International Machine Ngwá Ọrụ Fair (CIMT2017) na isiokwu nke "ọhụrụ ina, ọhụrụ ọkọnọ, na ọhụrụ ike" e nwere na Beijing China International ngosi Center (ọhụrụ ulo). Dị ka ụwa kasị akpa ngosi omume nke igwe ngwá ọrụ ụlọ ọrụ na nke ...
E nweghị Ndinam enweghị agbasa] Jianke Machine Mbibi ememe
site ha na 18-01-22
Iri afọ nke oké ihu igwe, na-agbasa a site ogwu na uke afọ iri nke ịrụsi ọrụ ike, na-alụ ọgụ-adịghị agwụ agwụ. Iri kemmeeme afọ na ọnwa na-eme ka amamiihe rụzuru. Na 2018, ọ bụ na njedebe nke afọ iri njem tara akpụ nke Nanjing Jianke Machinery. Na 2018, ọ bụkwa ihe ọhụrụ amalite PO ...
Jianke agwa gị ka ị na-aga 15 China International Machine Ngwá Ọrụ Fair
site ha na 17-04-15
Jianke ga-eme ka China mbụ ngwaahịa, WS20-8 asatọ axle center-achịkwa lathe, isonye na 15 China International Machine Ngwá Ọrụ Fair. Anyị ji obi anyị na-agba ọhụrụ na ndị agadi ahịa ileta na-eduzi ndị na saịtị! Egosi oge: April 17-22, 2017 exhibitors: Beijing China inte ...
Adress: No.72, Fengshan Road, Gaochun Economic Development Mpaghara, Nanjing, China